China Kedu ihe anyị kwesịrị ime megide COVID 19 Ndị na-eweta ya | Guanglei
Anyị niile maara na ndị mmadụ gburugburu ụwa ga-enweta ọgwụ mgbochi ọrịa megide COVID 19. Ọ pụtara na anyị nwere nchekwa zuru oke n'ọdịnihu? N'ezie, ọ dịghị onye nwere ike ijide n'aka na mgbe anyị nwere ike ịrụ ọrụ ma pụọ ​​n'efu. Anyị ka nwere ike ịhụ na enwere oge siri ike n'ihu anyị ma chọọ ịchebe iji chebe onwe anyị n'ime ụlọ na n'èzí.
Gịnị ka anyị kwesịrị ime ugbu a?
1. Were ọgwụ mgbochi COVID-19 ozugbo ị nwere ike. Iji hazie oge ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19, gaa na ndị na-eweta ọgwụ mgbochi na ntanetịime ọrụ ịhazi. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ịhazi oge ịgba ọgwụ mgbochi gị, kpọtụrụ onye na-eweta ọgwụ mgbochi ozugbo.
2. Yiri mkpuchi ihu mgbe ị na-apụdị ọbụna ị nweta ọgwụ mgbochi gị. Covid-19 agaghị apụ n'anya n'oge dị mkpirikpi, iji kpuchido gị na ezinụlọ gị nke ọma, na-etinye ihe mkpuchi ihu mgbe ọ dị mkpa n'ezie.
3. Jiri nhicha ikuku n'ime ụlọ. Dị ka ọnọdụ iku ume, COVID-19 na-agbasakwa site na ụmụ irighiri mmiri. Mgbe ndị mmadụ zere uzere ma ọ bụ ụkwara, ha na-ahapụ ụmụ irighiri mmiri n'ime ikuku nke nwere mmiri, imi, na nje. Ndị ọzọ na-eku ume ụmụ irighiri mmiri ndị a, nje ahụ na-ebutekwa ha. Ihe egwu di na onu ogugu ndi mmadu juputara na ikuku ikuku. N'okpuru ebe a bụ ihe na-ewu ewu Ikuku dị ọcha na HEPA iyo, anion na UV nwoke ịga ụlọ.
1) HEPA filtration rụọ ọrụ nke ọma weghachite ihe nha nke (ma pere mpe karịa) nje na-akpata COVID-19. Na arụmọrụ nke 0.01 micron (10 nanometers) na n'elu, HEPA nzacha, iyo si ahụ n'ime size nso nke 0.01 micron (10 nanometers) na n'elu. Nje virus nke na-akpata COVID -19 bụ ihe dị ka 0.125 micron (125 nanometers) na dayameta, nke dara n'ụzọ zuru oke n'ime nha nha nke HEPA na -echeta nwere arụmọrụ pụrụ iche.
2) The ojiji nke ihe ionizing nyo na a Air purifier enyere na irè mgbochi nke airborne ebute site na influenza.The ionizer site na-ezighị ezi ion, na-enye airborne ahụ / aerosol ụmụ irighiri mmiri na-ezighị ezi ebubo na electrostatically adọta ha ka a ghaghị ebubo mkpoko efere. Ngwaọrụ na-enyere ohere dị iche iche maka iwepụ nje na ngwa ngwa na ikuku ma na-enye ohere iji chọpụta ma gbochie nnyefe nje nke nje.
3) Dika nyocha di iche iche, UVC di iche-iche na-egbu oria nje na nje, a na-eji ya ugbu a iji kpochapu oru ogwu. Nnyocha na-aga n'ihu na-egosipụtakwa na irradiation UV nwere ikike nke ịdaba ma kwụsị ọrụ nje SARS -COV tinyere H1N1 na ụdị nje ndị ọzọ na nje.
Enwekwuru mmasị ọ bụla gbasara ihe nhicha ikuku, nabata ịkpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ na ego.
UV Home Air Purifier , kwesịrị ịdị neutralizes Home Air Purifier , Best Home Air Purifier Uk , Ozone Air Purifier Home ebusa , Home Ikpocha ikuku, Air Purifier N'ihi Home obo, All Products